सतपाल माहाराजलाई मानसरोवर पु¥याउछौं
नजिकैदै गरेको अंग्रेजी वर्ष २०२० लाई सरकारले भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन विभिन्न तयारी गरेको छ । सरकारको उक्त तयारीले पर्यटन क्षेत्रमा लागेकाहरु निकै उत्साहित पनि भएका छन् । भ्रमण वर्ष नजिकिदै गर्दा पर्यटन पर्बद्धनका विभिन्न गतिविधिहरु पनि भईरहेका छन् । सुदूरपश्चिम पनि पर्यटकहरुका लागि उत्कृष्ट गन्तब्य हो । संघीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न किसिमका योजना बनाएर भ्रमण वर्ष मनाउने र अधिक पर्यटक भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि यहांका पर्यटकीय स्थलमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार र पर्यटक आकर्षणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ? भ्रमण वर्षमा कति पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ? यहि विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावलसंग गरिएको कुराकानी ।
प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० का लागि के के तयारी गरेको छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्षलाई व्यवस्थित र फलदायी बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु अभियानकै रुपमा अघि सारेको छ । भ्रमण वर्ष मनाउन उत्साहित भएका छौं । संघीय सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष सफल पार्न मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रबद्र्धन समिति पनि गठन गरेको छ । उक्त समितिमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
समितिमा यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरु पनि समावेश छन् । पछिल्लो पटक सबै क्षेत्रको सहभागिता नभएको आवाज उठेपछि सदस्य संख्या थपेर १८ बाट ३६ पु¥याइएको छ । समितिको छिट्टै बैठक बसेर आवश्यक योजना र रणनीति बनाएर अघि बढ्ने तयारी रहेको छ । १ जनवरीदेखि नै हामी भ्रमण वर्ष व्यवस्थित र उत्साहित बनाउन तीब्र गतिका साथ लाग्ने छौं ।
यहांका पर्यटकीय स्थलमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा कस्ता गतिविधिहरु भईरहेका छन् ?
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंग मिलेर स्थानीय स्तरमा पर्यटन प्रबद्र्धनका विभिन्न गतिविधिहरु गरिरहेको छ । पर्यटकीय स्थल भएका क्षेत्रका स्थानीयले पर्यटकको स्वागत सत्कार तथा विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा दिने विषयमा पनि योजनाहरु बनिरहेका छन् । खासगरि स्थानीय जनसमुदायलाई नै पर्यटन प्रबद्र्धमा बढी सहभागि गराउने गरि अघि बढेका छौं । यसका साथै केही भौतिक पूर्वाधारमा पनि हामीले जोड दिएका छौं ।
बाटोघांटो, होमस्टे तथा पर्यटकीय स्थलका बारे सुचना आदीमा हामी केन्द्रीत भएका छौं । यसबाहेक कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको चिसापानी, बैतडीको जुलाघाट, दार्चुला लगायतका ७ ठाउँमा स्वागत द्वार पनि निर्माण गरिने छ । यसैगरि विभिन्न नाकामा ५ वटा पर्यटक सुचना केन्द्र राख्ने तयारी पनि भईरहेको छ । यसका लागि अध्ययन टोली खटिएको छ ।
भ्रमण वर्षमा प्रदेश सरकारले कुन कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ?
प्रदेश सरकारले ५ वटा पर्यटन करिडोर घोषणा गरेको छ । झुलाघाट–खोडपे –अपि –सैपाल महाकाली करिडोर, धनगढी –बुडर–शैलाश, खुटीया–दीपायल–खप्तड र खक्रौला–टीकापुर–रामारोशन आदी क्षेत्रलाई करिडोरमा राखेर यिनको प्रचार प्रसार लगायतका गतिविधिहरु भईरहेका छन् । यसबाहेक शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, माहाकाली झोलुङ्गे पुल, घोडाघोडी ताल र धार्मीक मन्दिरहरु लगायतकालाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटन करिडोरको घोषणा संगै ति क्षेत्रको धर्म संस्कृति र रहनसहन आदीको संरक्षण गरिको तिनको प्रचार प्रसार आदीमो विशेष जोड दिने र स्थानीयलाई बढी भन्दा बढी सहभागि गराउने योजना रहेको छ ।
भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसार कसरी भईरहेको छ ?
भ्रमण वर्ष २०२० लाई मधयनजर गरि पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु सबै लागिपरेका छन् । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका ५ करिडोरको प्रचार प्रसारका लागि होर्डिंग बोर्ड, गन्तब्य दुरी आदीका साइन बोर्डहरु राखिनेछ । सडकले नछोएका स्थान पाहाडी भेगमा भरिया, घोडचढी आदीको ब्यवस्थापन गर्ने पनि हाम्रो योजना छ । स्थानीयले उत्साहित बनाएर स्थानीय सामग्रीको प्रबद्र्धन गर्दै छौं । हामीले पर्यटन वर्षको प्रचार प्रसारका लागि सीमा क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीसंग पनि छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने योजना बनाएका छौं ।
भारतीय नाकाबाट भित्रिने पर्यटकलाई खासगरि नैनीताल, देहरादुन, दिल्ली लगायतका ठाउँमा पुगेर यहांका पर्यटकीय स्थल र भ्रमण वर्षका बारेमा पर्यटन व्यावसायीबाटै जानकारी दिने तयारीमा छौं । यसैगरि तराइमा बसोबास गर्ने राना थारु समुदायका व्यक्तिहरुलाई पनि पहाडतिर लगेर त्यहांको रहन सहन चाल चलन आदीका बारेमा अवलोकन गराइनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले भ्रमण वर्षमा कति पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशले अहिले सम्म संख्यात्मकरुपमा लक्ष्य निर्धारण नगरेपनि अधिकतम पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । विगतको पर्यटक आउने अनुपात हेर्दा गड्डाचाकी नाकाबाट गत वर्ष तेश्रो मुलुकका २९ सयका हाराहारीमा र गौरीफनटा नाकाबाड डेढ÷दुई सयका हाराहारीमा विदेशी पर्यटक आएका छन् ।
भारतीयहरुको दर्ता नहुने हुनाले पूर्ण कति पर्यटक भित्रिए भन्ने एकिन हुदैन । तर अब हामीले पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक पर्यटकलाई जोड दिनेछौ । यसबाहेक छिमेही मुलुक भारतका पर्यटकलाई बढी भन्दा बढी भित्र्याउने हाम्रो लक्ष्य हुनेछ । नजिकै रहेका औद्योगिक तथा पर्यटकीय नगरीहरुमा पुगेर व्यापक प्रचार प्रसार गरेर भारतीयलाई आकर्षित गरिनेछ । तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटक न्यून मात्रामा रहेका र ति पनि सुदूरपश्चिममा घुम्नेको संख्या अत्यन्त कम रहेकाले उनीहरुलाई यहां कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि आवश्यक छलफल र योजनाहरु भईरहेका छन् ।
खासगरि भारतको नैनीताल, देहरादुन, बद्रीकेदार लगायतका ठाउँमा पुग्ने विदेश पर्यटकमध्ये थोरै पनि यहां भित्र्याउन सके सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासले ठुलो फडको मार्नेछ । भारत उत्तराखण्डका पर्यटन मन्त्री सतपालजी महाराजलाई कञ्चनपुर हुदै कैलाश मानसरोवर पु¥याउन हाम्रो योजना छ । यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालयको टोली देहरादुन पुगेर सतपालजीसंग छलफल पनि भईसकेको छ । उहांलाई यहांको नाका भएर मानसरोबर पु¥याउन सके भारतीय पर्यटकको ओइरो लाग्छ । सतपालजीले पनि मानसरोबर जाने विषयमा सकारात्मक चासो देखाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सुदूरपश्चिममा प्रकाृतिक संगै धार्मिक पर्यटनका लागि बढी सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यका रुपमा कति स्थानलाई सुचीकृत गरेको छ ?
संघीय सरकारले भ्रमण वर्षका लागि सुदूरपश्चिममा कर्णालीको ¥यापटिङ्गलाई थप पर्यटकीय गन्तब्यमा सुचीकृत गरेको छ । हाम्ीले बुभ्mदाखेरी विगतमा सुचिकृत भएकासंगै चिसापानीलाई पनि सुचिकृत गरिएको भन्ने जानकारी पाएका छौं । प्रदेश सरकारले पनि छट्टै पर्यटन प्रबद्र्धन समितिको बैठक बसेर सुचिकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासमा विभिन्न काम भईरहेका छन् तर औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन, यसलाई प्रदेश सरकारले कसरी लिएको छ ?
सुदूरपश्चिममा भारतसित जोडिएका नाकाहरु सहज छैनन् । यसकारण यहांको औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । अहिले पनि यहां स्थापना भएको केही उद्योगहरुले नेपालगञ्ज र भैरहवा भएर कच्चा पदार्थ वा अन्य आवश्यक मालवस्तु ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले एकातिर ढुवानीका कारण उत्पादकत्व बढ्छ । अर्काेतिर झन्जट बढी हुन्छ । पछिल्लो सयम महाकाली नदीमो चार लेनको पक्की पुल निर्मँणाधीन अवस्थामा छ ।
दोधारा चांदनीमा सुख्खा बन्दरगाहको कुरा पनि धेरै अगाडी बढीसकेको छ । बेदकोट नगरपालिकाको छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यि सबै गतिविधि हेर्दा अब छिट्ट सुदूरपश्चिम औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अगाडी बढ्ने निश्चित भएको छ । महाकालीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलले यसलाई प्रमुख नाकाका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना बढाएको छ । त्यसपछि यहां उद्योग स्थापनाको क्रम बढ्ने छ ।
पछिल्लो पटक यहांको जनज्योती बहुमुखी क्याम्पसको विषय निकै चर्चामा छ । यसमा तपाइको नाम पनि जोडिएर आएको छ । तपाईमाथि पनि जिल्ला अदालतमा किर्ते र ठगिको मुद्दा दत्र्ता भएको छ नी ?
मैले पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्रै यो कुरा थाहा पाएको हुं । अहिले यो मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन छ । धेरै कुरा बोल्नु उचित हुदैन । सम्माननिय अदालनले गर्ने निर्णय पर्खिनु उचित हुनेछ । जनज्योती बहुमुखी क्याम्पसमा म साधारण शेयर सदस्य मात्रै हु । सञ्चालक समितिले कमी कमजोरी गरेको भन्ने कुरा मैले पनि मुद्दा परेपछि मात्रै थाहा पाएको हु ।
उक्त कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । मैले कतै शेयर बिक्रि गरेको पनि छैन । मेरो शेयर जस्ताको त्यस्तै रहेको हेर्न सकिन्छ । यदि म सञ्चालक समितिमा रहेको र शेयर बिक्रि गरेको भए मेरो पनि संलग्नता हुन्थ्यो । पनेरु थरका व्यक्तिलाई शेयर बिक्रि गरेको भनि केही सञ्चार माध्यममा आएको छ तर पनेरु थरका ति व्यक्तिलाई मैले भेटेको पनि छैन शेयर बेच्ने त कुरै भएन ।
सञ्चार माध्यमले पनि तथ्यमा आधारित भएर लेखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अनावश्यकरुपमा मेरो नामलाई हाइलाइट गर्ने काम भयो ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, कार्तिक २१, २०७६, ०९:११:००